Ukuphumla kwihotele ye-boutique Ihotele iSary-Arqa Borovoye - I-Airbnb
Ukuphumla kwihotele ye-boutique Ihotele iSary-Arqa Borovoye
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguАршын
· Iibhedi eziyi-27
· Ziyi-9 iibhafu ezisetyenziswa ngabantu bonke
Uhlobo lweklabhu yehotele yeBoutique i-Sary-Arqa imema iindwendwe ngovuyo!
Kwinkonzo yakho kukho amagumbi amakhulu ali-9 kunye noyilo olulodwa oluvela kwiqela le-KEP, indawo yokutyela, ibha, i-karaoke, iholo ye-disco. Apha ungaqesha iibhayisekile zokuhamba ngebhayisekile ecaleni kweLake Shchuchye enemibalabala.
+ Ukuhlala okukodwa phakathi kwehlathi
+ I-IVF yosapho-iklabhu
+ Indawo yokuhamba-i-300m ukuya elunxwemeni
+ Inkonzo ekumgangatho ophezulu.
Amagumbi ahlulwe abe yimigangatho emibini, umgangatho ngamnye unengcamango yayo yoyilo ekhethekileyo, ebonakaliswa kumbala wemibala yegumbi kunye nezixhobo, ngelixa ingcamango jikelele inokulandelwa kwiinkcukacha zokuhlobisa.
Ihlathi lePine, umoya ococekileyo kunye neendlela zebhayisekile ezilungiswe kakuhle zokuphumla usapho luhamba ecaleni konxweme oluhle lweLake Shchuchye, umgama nje wemizuzu eli-10 ukusuka kwindawo ezinomtsalane ezifana neBorovoye Lake - iperile yengingqi yeAkmola, iZhumbaktas Island - okanye njenge bakule ndawo bayibiza "SPHINX", iNtaba Okzhetpes i a buza ngokwenene abathandi indawo engezansi.
Emva kokunandipha ubuhle bendalo, kwindawo yethu yokutyela unokonwabela izitya ezivela kumpheki we-brand-Artem Evdokimov kwindawo yethu yokutyela i-Sary-Arqa grill bar. Kwaye uchithe ubusuku nosapho lwakho nidlala iibhiliyoni okanye niphumle kwisauna yethu.
Kwabo umphefumlo wabo uculayo, ihotele yethu ye-boutique inekaraoke ene-repertoire ebanzi yeengoma.
Umbuki zindwendwe ngu- Аршын
Emva kokuqinisekisa ukubhukisha, umphathi wethu wenkonzo uya kufumaneka kuwe kwangoko, (ifumaneka 24/7)